Olole loogu jiro sidii waddooyinka dalka Uganda looga baddali lahaa magacyada xiriirka laleh guumaystihii - Tilmaan Media
Olole loogu jiro sidii waddooyinka dalka Uganda looga baddali lahaa magacyada xiriirka laleh guumaystihii
Kumanaan ree Uganda ah ayaa saxiixay dalab onlayn ah oo lagu doonayo in lagu baddalo magacyada waddooyinka iyo meelaha danta guud ee loogu magac daray guumaystihii Ingiriiska.
Dalabka oo billawday maalinkii Talaadada ayaa waxaa illaa iyo hadda saxiixay in kabadan 2,500 oo ruux.
“ Waxaan rumaysan nahay in laga baabi,iyo meelaha bulshadu isugu timaado muuqaaladii kaharay guumaystaha in ay lafdhabar katahay soo afjaridda guumaysiga iyo soo afmeeridda wakhtigii ku tagrifalka iyo xasaanadda” ayaa lagu sheegay dalabka.
“ Dhacdadii foosha xumayd ee kadhacday Maraykanka laguna dilay George Floyd, waxay muujisay sida dagdaga ah ee loogu baahan yahay in xal loo helo nooc walba oo cadaalad darro iyo midab takoor ah.
“Waxaa lagaaray wakhtigii aan ka run sheegi lahayn taariikhda inaga oo aqabalayna gabood fallada lagaystay lagaystay, marka aan u dabbaal dagayno xuska geesiyadii utaagnaa sarraynta qiyamka xorriyadda,sharafta nabadda iyo cadaaladda” ayaa lagu daray qoraalka dalabka.
Uganda waxay madaxbanaanida ka qaadatay Ingiriiska bishii Oktoobar 1962. Waxayna ahayd maxmiyad taabacsan Imbaraadooriyadii Ingiriiska mudadii udhaxaysay 1894-1962.
Wuxuu 1983 uu kambanigii la oran jiray “Imperial British East Africa Company” uu maamulka maxmiyadda ku wareejiyay dowladda Ingiriiska.
Dalabkaan ayaa yimid kadib markii Talaadadii fagaaro kuyaalla magaalada Antwerp ee dalka Biljam laga qaaday taaladii boqorkii Biljam ee la oran jiray Leopold II. Sidoo kale dad gaaraya 63,000 ayaa saxiixay dalab lagu doonayo in lagu burburiyo taallooyin kale oo uu leeyahay.
Boqor Leopold II ayaa dhamaadii qarnigii 19 aad iyo bilawga qarnigii 20aad, qayb wayn ka qaatay xadgudubyo isugu jiro addoonsi, dil iyo dhac oo loo gaystay dadyawgii afrikaanka ahaa ee uu guumaystay Biljamku.